FATY TENY MARAIS MASAY
Lehilahy iray no hita faty teny amin’ny ranon’ny Marais Masay omaly. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana na maty an-drano na nisy namono ity lehilahy ity.
Mahatratra 10 302 194 ny mpifidy handrotsa-bato amin’ny fifidianana depiote ny 27 mey ho avy izao raha ny lisi-pifidianana nakatona omaly talata 15 mey 2019 no jerena.
Nanomboka omaly ny famakiana ilay vato be 500 taonina eny Tsarafaritra Tsimbazaza izay ahiana hikodia ka hampidi-doza. Ireo mpamaky vato no manao izany amin’ny fomba gasy fa tsy mampiasa fitaovana goavana. Fianakaviana 76 no tsy maintsy nesorina tamin’ny tranony.
Vita araka ny niheverana azy ny tsenaben’Ivato izay hotokanana tsy ho ela. Tsy mbola azo atao moa ny mitokana zava-bita ao anatin’ny fampielezan-kevitra koa tsy maintsy aorian’ny fifidianana no hanaovana izany. Mahazaka mpivarotra 3 000 ity tsenan’Ivato ity.
Tanàna 50 amin’ireo 115 vatsian’ny Jirama herinaratra no mbola ahitana delestazy amin’izao fotoana
Orinasa maro no efa vonona hanampy ny Barean’i Madagasikara amin’ny fiatrehana ny CAN 2019. Efa eo am-pelatanan’ny “Comité de normalisation” ihany koa ny “prime” ho an’ny Barea izay avy amin’ny fitondrana teo aloha sy ny ankehitriny, hoy Rtoa Atallah Beatrice.
POLISY NANAO HADALANA
Tsy maintsy hihatra ny sazy ho an’ireo polisy 3 mirahalahy mamo ka nanao hadalana sy nanimba fananan’olona. Tsy hilefitra ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka fa tsy maintsy hampiharina amin’izy ireo ny lalàna, hoy ny talen’ny kabinetra. Sazy mety hahazo azy ireo ny fampidinana grady na fandroahana mihitsy.
Ireo mpampianatra efa nahazo fiofanana manokana ihany no hampihatra ny fanovana ny rafi-pampianarana izay nanafoanana ny Serie A, C, D fa nametrahana kosa ny Serie Litteraire (L), Serie Scientifique (S) ary ny Serie Organisation Société Economie (OSE).